Channable: Nri Ngwaahịa gị Iji Ahịa Comparison nrụọrụ, Mgbakwunye, Ahịa, na Ad Netwọk | Martech Zone
Nweta ndị na-ege ntị ebe ha nọ bụ otu n’ime ohere kachasị na atụmatụ ahịa ahịa dijitalụ ọ bụla. Ma ị na-ere ngwaahịa ma ọ bụ aka ọrụ, na-ebipụta otu isiokwu, na-etinye pọdkastị, ma ọ bụ na -ekekọrịta vidiyo - itinye ihe ndị ahụ ebe enwere ọrụ, ndị na-ege ntị dị mkpa dị oke mkpa maka ọganiihu azụmahịa gị. Ọ bụ ya mere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpo okwu ọ bụla nwere interface interface yana igwe enwere ike ịgụta igwe.
N’ileghachi anya n’afọ a, mkpọchi tụgharịrị ahịa na ecommerce. Rob Van Nuenen, Onye isi oche nke Channable na e-azụmahịa ọkachamara, na-enye echiche ndị na-esonụ banyere ọgba aghara ahụ:
Adobe na ngwa agha mepere ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na ha enweghị ọnụnọ n'ịntanetị na mbụ. Ihe ịtụnanya bụ etu ọ dị obere ụlọ ahịa gbapụtara na ndị nwe ha - na nso nso a na-enweghị ọrụ ma ọ bụ ndị na-ere ahịa na-enweghị ọrụ na -emepụta ụlọ ahịa maka ngwaahịa achọrọ iji mee ka ha nwee ike ịkwụ ụgwọ na-abata.
Storeslọ ahịa dị n'ịntanetị ịgbanye ọwa nke ha na-ere - n'uwa niile
COVID bụụrụ mkpọmkpọ anya na-elekọta mmadụ na-ere - ma a na-ewere ya ugbu a ọwa dị mkpa
Ọwa ntanetị dị ka Google bụ isi na-akwado obodo dị na ya site na idebe ndị na-azụ ahịa na mpaghara
Ihe ikpo okwu ya, O kwere omume, bụ usoro ikpo okwu e-commerce zuru ụwa ọnụ nke na-eme ka ndị na-ere ahịa dijitalụ, ụdị, na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị merie nsogbu ndị a na ohere ha.
Gịnị Bụ Ngwaahịa Ngwaahịa?
Nri ngwaahịa bụ faili dijitalụ nke nwere eriri data na-enye nkọwa banyere ọtụtụ ngwaahịa. Enwere ike iji ndepụta ngwaahịa iji mee data na ezigbo oge site na ecommerce ma ọ bụ ikpo okwu gị na mpụga na sistemụ ndị ọzọ - gụnyere njikwa njikọ, usoro ịre ahịa email, mgbasa ozi mmekọrịta, ecommerce nyiwe, na / ma ọ bụ nyiwe njikwa.
Channable: Ree Ngwaahịa gị n'ebe niile
O kwere omume na-enye ngwa ọrụ ntanetị maka ụlọ ọrụ ịzụ ahịa na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị iji zipu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha n'ọma ahịa dị iche iche, igwe nyocha, yana nyiwe mgbakwunye. Site na Channable, azụmaahịa nwere ike nfe, mezue ma bulie ozi ngwaahịa ha ka ọ nweta nsonaazụ kacha mma. Ikpo okwu ahụ na-eziga ozi kachasị mma na ọwa mbupụ ọ bụla ha họọrọ (dịka Amazon, Shopping.com, ma ọ bụ Google).
Channable Feed Management Atụmatụ Gụnye
Easy ngwaahịa categorization - Nchịkọta njikwa nri na-enye gị ohere ịhazi ngwaahịa gị ka ị nwee ike dakọtara na ngalaba nke ọpụpụ mbupụ. Site na Channable, ị nwere ike wepụta otu edemede site na iji nkwuputa nke ọma maka ụfọdụ nyiwe mgbasa ozi kachasị ewu ewu. Usoro a nwere ike ime ka ngwa nri ọhụrụ dị ngwa, bulie visibilụ gị na ọwa, ma bulie iru gị.
Ike ma ọ bụrụ na-achịkwa iwu - Ọtụtụ mgbe, ị ga-achọ onye nrụpụta iji melite ndepụta ngwaahịa gị. Site na nkwado nke ngwa njikwa njikwa, usoro dị mfe ma ọ bụrụ na-enyere gị aka 'ịdebere' onwe gị. A ga-etinyekwa iwu ndị a n'ọrụ na ngwaahịa ndị etinyere na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. You nwere ike kpomie ọnụ ahịa ngwaahịa na ntanetị ọ bụla na-ebupụ ma gbanwee ozi ahụ n'otu oge. Ngwá ọrụ nchịkwa nri dị mma ga-enye gị nzaghachi ngwa ngwa mgbe a na-etinye iwu ọ bụla na katalọgụ ngwaahịa gị.
Nri data di elu - Mbupụ oke mma, ndepụta data data zuru oke zuru oke ga-emeziwanye ọhụụ gị n'ịntanetị. Na mkpokọta, ịkwesịrị ịmekọrịta 'ubi' nwere ozi ngwaahịa na ndepụta mbubata gị na 'ubi' achọrọ nke ndepụta mbupụ achọrọ. Ngwa nchịkwa nri na-amata nkọwapụta ndepụta niile maka ọwa mmiri ejikọtara ya ma na-eme ọfụma na mgbanwe na mmelite.
Nri & API - Iji aka gi hu na ihe omuma ahia gi, dika ahia, noro nke oma nwere ike iwe otutu oge. Fọdụ ahịa na-enye njikọ API na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị nke na-eme ka akpaghị aka, na-aga n'ihu mgbanwe nke ozi n'etiti nyiwe abụọ ahụ. Ngwa njikwa nri nwere ike ibubata data ndepụta gị na oge oge iji hụ na ndepụta ngwaahịa gị yana ozi ndabere gị na-arụ ọrụ na ọwa mbupụ gị.
A na-ebubata ugbu a site na Lightspeed, Shopify, ecManager, Magento, CCVShop, Divide.NOW, WooCommerce, Mijnwebwinkel, inRiver, PrestaShop, Shopware, BigCommerce, na ndị ọzọ. Channable na-enye karịa 2500 ọnụahịa tụnyere weebụsaịtị, Mgbakwunye netwọk, na n'ọma ahịa mbupụ na.
Banye Up N'ihi Channable
Tags: ad njikwa ngwa ngwa ahiaMgbakwunye ngwaahịa nrinri ngwaahịa AmazonCCVShopenwere ikeọwaCOVID-19Kewaa ugbu aonye njikwaecommercenri ecommercenri ecommerce ngwaahịaemail ahịa ngwaahịa ndepụtanjikwa nrigoogleinriverọkụmagentoMijnwebwinkelppc ndepụta ngwaahịaPrestaShopndepụta ngwaahịanjikwa nri ngwaahịaRob Van Nuenenụlọ ahịaLọ ahịaelekọta mmadụ media ngwaahịa ndepụtana-elekọta mmadụ na-erewoocommerce